लुटले लुटने नै हो की ? - Satelite's BlogSatelite's Blog
लुटले लुटने नै हो की ?
नेपाली सिनेमा बृत्तमा अहिले निश्चल बस्नेत निर्देशित ‘लुट’को चर्चा छ। अनलाइन, फेसबुक, यु टिउब लगायत दैनिक खबरपत्रिकाहरुमा लुटका बारेमा चर्चा-परिचर्चा भैरहेको अवश्था हो। यसरी सिनेमाहरुले हाम्रो दैनिक जीवनका बहसहरुमा ठाउँ पाउनु निकै खुसीको कुरा मान्छु म। केहि समय अगिसम्म कुन नेपाली सिनेमा रिलिज हुँदैछ भन्ने थाहा हुन्नथ्यो अहिले रिलिज हुनुअघि सिनेमाका बारेमा टन्नै चर्चा, बहस र छलफल हुने गरेको छ। यसअघि दिपक रौनियारको ‘हाइवे’ ले राम्रो चर्चा बटुलेको थ्यो। हाइवे र लुट आफैमा फरक बिषयमा बनेका सिनेमाहरु हुन तर दुबैको समानता के हो भने, दुबै सिनेमाका निर्देशक पछिल्लो पुस्ताका युवाहरु हुन। युवाहरु हुँदैमा सिनेमा राम्रा र बुढाहरुले बनाउँदैमा नराम्रा हुने हैनन, नत्र तुलसी घिमिरेले बनाएका सिनेमा तोरिलाहुरे हुनुपर्ने ? तर स्थिति त्यस्तो छैन। घिमिरेले बनाएका सिनेमाहरु ब्यवसायिक रुपमा सफल या असफल जे होउन, म त्यहाँ कला देख्छु। उनका सिनेमामा लय हुन्छ। सिनेमाको भाषा बुझेका सिनेमा-मेकर लाग्छन मलाइ उनी। दिपक या निश्चलका सिनेमाहरुमा देखिनेगरी प्राविधिक उच्चता देखिएको छ। उनीहरुले आफ्ना कथा भन्न प्रबिधिको कुशल प्रयोग गरेको देखिन्छ, उनीहरुका प्रोमो, ट्रेलर र टिजरहरु हेर्दा।
कुनै बर्षको किम्फमा दिपकको छोटो फिल्म ‘पुजा’ हेरेपछि नै उनको कामको प्रशंसक भएको थियँ। त्यसैले उनको ‘हाइवे’ बाट राखिएका आशाहरु त्यही उचाइका छन। मलाइमात्र हैन, हाइवेबाट थुप्रैले हाम्रो सिनेमाको धार बदलिने आशा गरेका छन। निश्चलको पनी पहिलो फिल्मको प्रोमो हेर्दा आशा राख्ने ठाउँ पक्कै देखिन्छ तर उनले जसै youtube मा लुटको आइटम डान्स रिलिज गरे, मेरो आशाले हावा खायो। यो मेरो ब्यक्तिगत धारणा हो, मेरो बिचारले लुटसँग सम्बन्धितहरु दुखी हुनुपर्ने कारण पटक्कै छैन। दर्शकका रुपमा मलाइ आइटम डान्सहरु वाहियात लाग्छन। मेरो बिचारमा यस्ता डान्सहरुले कथालाइ अगाडी बढाउनुपर्नेमा दर्शकहरुलाइ कथाको लयबाट बहिर्गमन गराउँछन। कथा नै डान्सरको छ भने त बेग्लै भो। यसैले लुटको आइटम डान्सले मलाइ लुटन सकेन तर म अनुमान गर्नसक्छु- आइटम डान्स मन पराउनेहरु भएरै होला निश्चलले सुष्मा कार्कीलाइ नचाएको। तर मेरा लागी आइटम डान्सले गर्दा ‘लुट’को हाइट स्वात्तै घटाएको छ। निश्चलको अन्तर्वार्ता पढेँ– उनका कुराहरु मन परे। उनी भन्छन, सर्वप्रथम उनी दर्शकलाइ मनोरञ्जन दिने सिनेमा बनाउन चाहन्छन जसले हलसम्म दर्शकहरु तान्न सकोस। तर के निश्चलले बुझेको मनोरञ्जन आइटम डान्सयुक्त हो ? मैले केही नेपाली सिनेमाहरु हेरेको छु-जहाँ नेपाली र भोजपुरि गीतहरुमा नायिकाहरुको उत्तेजक नृत्य प्रस्तुत गरिएको छ। ती नृत्य र गीतहरु आफैमा दुखि देखिन्थे पर्दामा, कसरी मनोरञ्जन दिउन तिनले ? निस्चलको अर्को मन परेको कुरा के हो भने- उनी यथार्थको नजिक रहेका सिनेमा बनाउन चाहन्छन। सेटमा खिचिने सिनेमा भन्दा बास्तविक लोकेशनमा पुगेर खिच्न चाहन्छन। पहिलोपल्ट कुनै नेपाली निर्देशकको कुरा चित्त बुझेको हो। उनले सिनेमामा काठमाडौमा ब्याप्त अपराध र अपराधिक बातावरणको सक्दो यथार्थिक चित्रण गरेका होलान भन्ने मान्छु म सिनेमामा तर उनको त्यो आइटम डान्सले त्यो यथार्थबाट दर्शकलाइ बिच्काउँछ। निर्देशकका रुपमा उनी आफ्नो कथा आफुले चाहेको फर्म्याटमा प्रस्तुत गर्न स्वतन्त्र छन तर कुनै बारमा चल्ने उत्तेजक नृत्यमा झुम्दै दारु पिउने कथाहरु हामीले प्रशस्तै हेरिसकेका छैनौ र ? मैले निश्चललाइ हतोत्साहि पार्न खोजेको हैन तर दर्शकका रुपमा हरेक मान्छेले सिनेमाप्रतिको धारणा ब्यक्त गर्न त पाइन्छ नै।
‘लुट’ रिलिज हुनेबेलामा त म अमेरिकामा हुनेछु सायद र हेर्नपाउने छैन तुरुन्त तर नेपाल फर्केपछि म हेर्नेछु। मनोज पण्डितले समिक्षा पक्कै लेख्नेछन। समिक्षामा उनले सारै राम्रो, ठिकै, वाहियात जे लेखेपनी ‘लुट’ म हेर्नेछु। दृश्यमार्फत कथा भन्नु सामान्य काम होइन, निश्चलले त्यो प्रयाश गरेका छन। उनीजस्ता नयाँ सिनेमामेकरहरुलाइ दर्शकका रुपमा हाम्रो साथको आवश्यकता अवश्य हुन्छ र गर्नुपर्छ तर म ‘हाम्रो मनभित्र नेपाली चलचित्र’ भन्नेजस्तो वाहियात नारामा बिश्वाश गर्दिन। कुन सिनेमा हेर्ने, कुन पुस्तक पढने र कुन संगीत सुन्ने भनेर मलाइ कुनै भुगोलबिशेषले बाँध्न सक्दैन। २ किलोको ल्यापटपमा सारा संसार अटाइसकेको बेलामा खोक्रो नाराको आडमा दर्शकलाइ बाँध्न खोज्नु असफल प्रयासमात्र हो।
हाइवे रिलिज हुन त सायद केही समय लाग्ला तर लुट रिलिजको समय आउन धेरै छैन। लुटले दर्शकलाइ लुटन सफल रहोस भन्ने कामनासहित लुटेराहरुलाइ शुभकामना ।
Loot Poster source: Loot Facebook Page
हाय रे नेपाली सिनेमा….
शहरमा स्याल आतंक छ…